मप विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारका लागि दौडधुप - Paschimnepal.com
मप विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारका लागि दौडधुप
पूर्वडीनदेखि सरकारका उपसचिवसम्मको आवेदन
सुर्खेत । असार २९ गतेदेखि रजिस्ट्रारविहीन बनेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रारका लागि आवेदन आहृवान गरेपछि उक्त पद हात पार्न दौडधुप सुरु भएको छ ।
रजिस्ट्रारका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका छन् । तर विश्वविद्यालयले पूर्वडीन तथा सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा. केशरसिंह राना, पूर्वडीन प्रा. डा. दीपबहादुर रावल, पूर्वडीन सह-प्राध्यापक अनन्तराज घिमिरे, डा. नारायप्रसाद पौडेल शर्मा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय कर्णाली प्रदेशका प्रमुख उपसचिव जीतबहादुर शाह र डा. वुद्धि सापकोटाको नाम मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।
केही व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक भइसके पनि विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहले गोपनीयताका कारण सबैको नाम सार्वजनिक नगरिएको बताएका छन् ।
नाम सार्वजनिक भएपछि उनीहरु आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।
राना र पौडेलको चर्चा
सार्वजनिक भएका व्यक्तिमध्ये बाटै रजिस्ट्रार बन्ने आकलन गरिएको छ । मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा सेवा आयोगका सदस्य तथा विज्ञान संकायका पूर्वडीन केशरसिंह रानालाई हेरिएको छ ।
राना यसअघि उपकुलपतिको दौडबाट बाहिरिएका हुन् । राना अनुभव र कार्यसम्पादनको हिसाबले आवेदन दिएका अरुभन्दा वरिष्ठ हुन् ।
विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पसको रुपमा रहेको पब्लिक साइन्स क्याम्पसको प्रमुख रहिसकेका राना विश्वविद्यालयको डीन हुँदै सेवा आयोगको सदस्यसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
अर्का उम्मेदवार डा. नारायण पौडेल लामो समय काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेका र हाल मप विश्वविद्यालयमै करारमा कार्यरत छन् ।
हाल मप विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायका निर्देशक पौडेल यसअघि विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको प्राध्यापकको खुलातर्फको परीक्षामा असफल भएका थिए । उनले अहिले पनि प्राध्यापकका लागि परीक्षा दिएका छन् ।
यस्तै, पूर्वडीन एवम् सह-प्राध्यापक अनन्तराज घिमिरेको पनि रजिष्ट्रारको लागि चर्चा रहेको छ ।
क्षमतावान मान्छे ल्याउँछु : उपकुलपति सिंह
रजिष्ट्रारको सिफारिस गर्ने अधिकार उपकुलपतिलाई छ । उपकुलपति प्राध्यापक डा. नन्दबहादुर सिंहले अर्थशास्त्रमा अब्बल पात्रलाई रजिस्ट्रारको लागि सिफारिस गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन भन्दै विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रारसँगै विभिन्न तीन संकायका डीनका लागि खुला दरखास्त आहृवान गरेको थियो ।
उपकुलपति प्रा.डा. सिंहले योग्य र दक्ष उम्मेदवार रजिष्ट्रार हुने बताए । ‘रजिष्ट्रार, सम्बन्धित विषयमा व्यवसायिकता भएको, अर्थशास्त्र बुझेको, प्रशासन बुझेको नियुक्त हुन्छ,’ उपकुलपति सिंहले भने ।
विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित रहेर रजिष्ट्रारको नियुक्त हुने र विश्वविद्यालयमा योग्य मान्छे आउने उनले बताए ।
उपकुलपति सिंहले तीन सदस्यीय छनौट समिति पनि बनाइसकेको जानकारी दिए । ‘तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्, मैले योग्य र क्षमतावान मान्छे ल्याउछु,’ उनले भने ।
तर, विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरुले भने उपकुलपतिको नियत राम्रो नभएको बताएका छन् । विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीले उपकुलपतिले आफू निकट जुनियर व्यक्तिलाई रजिष्ट्रार बनाउने खेलमा लागिरहेको बताए । अनलाइनखबरबाट
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन ६, २०७७ 5:00:04 PM
Prevपुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग अवरुद्ध
Nextकर्णालीमा थपिए १२ कोरोना संक्रमित, १४ जना डिस्चार्ज